न्यायाधीश कोइरालाले १० करोडको मोलमोलाइ गरे, रकम कति हात पारे त ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
न्यायाधीश कोइरालाले १० करोडको मोलमोलाइ गरे, रकम कति हात पारे त ?
अडियो टेप बाहिरिएपछि बुधबार दिउँसो न्याय परिषदको आकस्मिक बैठक
२०७९ असार ९, बिहीबार १७:४०:००
काठमाडौँ । सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई थुनामा नपठाई धरौटीमा छाड्नका लागि न्यायाधीश र वकिलबीच १० करोड र २ करोड रुपैयाँ घूसका लागि मोलमोलाइ भएको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि न्याय परिषदले छानबिन गर्दै छ । न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न परिषदले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ भने अधिवक्ता रुद्र पोखरेलमाथि पनि नेपाल बार काउन्सिलले कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कुरा न्यायालयभित्र विकृति, विसङ्गति अचाक्ली झाँगिएको र न्यायिक नेतृत्वले नै यसलाई संरक्षण दिएको भनेर बार र बेन्च आन्दोलित भइरहेकै बेला भएको हो । सर्वोच्च अदालत प्रांगण नेपाल बार एसोसिएसन यसरी न्यायिक सुधारको नारासहित तातिरहँदा बारकै तत्कालीन कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल भने जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग टेलिफोनमा यसरी मोलमोलाइ गर्दै रहेछन् ।
अडियो टेप बाहिरिएपछि बुधबार दिउँसो न्याय परिषदको आकस्मिक बैठक बस्यो । बैठकले न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न तत्कालै समिति गठन गरेको छ । परिषदकै सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिमा सदस्यहरु पाटन उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश महेश पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई सदस्य तोकिएको छ । समितिलाई ४५ दिनको समय दिइएको छ । कोइरालालाई काम गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।
इच्छाराज तामाङविरुद्ध प्रहरीले ‍‍‍‍‍‍ठगी र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा गत ‍‍‍‍मंसिर १७ मा मुद्दा चलाएको थियो । उनका नाममा ५ अर्ब ६७ करोड बिगो थियो । उनलाई थुनामा पठाउने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने बहस नै लामो समय चलेको थियो । त्यसको पृष्ठभूमिमा न्यायाधीश र वकिलबीच घूसको मोलमोलाइ रहेछ भन्ने अडियो कुराकानीबाट पुष्टि हुन्छ ।
न्यायाधीश कोइरालाले इच्छाराज तामाङलाई पुस १४ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेकाले घूसमा कुरा नमिलेको आशंका गरिएको छ । अर्थात् कोइरालाले घूस लिएनन् कि भन्ने कोणबाट धेरैले कुरा उठाएका छन् । तर कोइरालाले के चलाखी गरेका छन् भने मुख्य अभियुक्त तामाङलाई थुने पनि अर्का अभियुक्त लालकाजी गुरुङलाई थुना बस्नु नपर्ने आदेश गरिदिएका छन् । तामाङको व्यवसाय हेर्ने खास व्यक्ति लालकाजी गुरुङ हुन् । जनताको अर्बौँ रुपियाँ पचाएका तामाङ जेलभित्र सुरक्षित छन् भने बाहिर गुरुङलाई खेलोफड्को गर्न सजिलो भएको छ । यो उनीहरुले सहमतिमै रचेको चालबाजी पनि हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ ।
एकातिर चोखो देखिएर अर्कोतिरबाट शुभलाभ गर्ने कोइरालाको स्थापित शैली नै हो । त्यसैले यस प्रकरणको छानबिन गर्दा केवल बाहिरिएको टेपलाई मात्र आधार नमानी लालकाजीको फाइलसमेत झिकाउने हो भने धेरै कुरा पत्ता लाग्नेछ । साथै न्यायाधीश कोइरालाले चोलेन्द्रशमशेर राणादेखि दीपककुमार कार्कीसम्मलाई कसरी खुसी पार्न सके भनेर पनि छानबिनको विषय बनाउनुपर्छ । जिल्ला न्यायाधीश अम्बिका निरौला र एक नम्बर न्यायाधीश राजुप्रसाद खतिवडाको नाम पनि यसमा मुछिएकाले उनीहरु अवश्य छानबिनमा पर्ने नै छ ।
यही प्रकरणमा घूस प्रस्ताव गर्ने अधिवक्ता पोखरेलमाथि बार काउन्सिलले पनि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पोखरेलले चोलेन्द्रशमशेर राणा चरम विवादित भइरहेका बेला उनको पक्षपोषण गरेका कारण राणासँग केकति लेनदेन गरे भन्ने पनि छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ । कानुन व्यवसायीको छाता संगठनले समेत यस प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेको छ ।
सारमा यस प्रकरणले विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीश र वकिलबीच निर्धक्कसँग कसरी हुने रहेछ भन्ने मात्रै देखाएको छैन, बेथिति कुन हदसम्म झाँगिएको रहेछ भन्ने पनि उदांगो भएको छ । यसले अझै क–कसलाई नंग्याउँछ, हेर्न बाँकी नै छ । लहरो राम्रोसँग तान्ने हो भने धेरै ठूलो पहरो गर्जिन सक्नेछ ।